ဒီတဈပတျ အတှငျး ဘယျလို ထူးခွားမှုတှကေ သငျ့ အတှကျ စောငျ့ကွို နမေလဲ…. – Let Pan Daily
Let Pan | April 10, 2021 | Knowledge | No Comments
သငျ လုပျဆောငျရမယျ့ တာဝနျ အသဈတဈရပျရှိတယျ။ သငျ့ ဘဝထဲကို ဝငျရောကျလာမယျ့ အခဈြမတ်ေတာတှေ နဲ့ ပတျသကျပွီး လကျခံကွို ဆို ရ မယျ။
တဈစုံတဈရာကို ဆုပျကိုငျ ထားနရေတယျဆိုရငျလညျး ဒီအခြိနျမှာ လှတျခလြိုကျဖို့ သငျ့နပွေီ။ သငျ့အတှကျ ပလနျအသဈတှကေ စောငျ့နေ တယျ ။လကျတှဲဖျောမရှိတဲ့သူတှေ လကျတှဲဖျောရှာတှမေ့ယျ၊ သားသမီးလိုခငျြနတေဲ့ သူတှေ သား၊ သမီးထှနျးကားမယျ့ နိမိတျတှရှေိတယျ။
အသဈ တဈစုံတဈရာနဲ့ စိတျလှုပျရှား ဖှယျတှဟော သငျ့ဘဝထဲကို အစုလိုကျ အပွုံလိုကျဝငျလာဖို့ရှိတယျ။ကောငျးသတငျးတှဝေနေပွေီး ကွှယျ ဝပွညျ့လြှံမှုတှကေို တဈလုံးတဈဝ ခံစားနရေမယျ့ အခြိနျဖွဈပါတယျ။ကိုယျ့ခဈြသူက ကိုယျ့ကိုလကျထပျမလားဆိုတာ သိနိုငျမယျ့ အခကျြ (၅) ခကျြ
တဈစုံတဈရာနဲ့ ပတျသကျပွီး စိတျထဲမှာ မရှငျးမရှငျး ဖွဈနမေယျ။ဘာကွောငျ့ဆိုတာတှကေို နားလညျဖို့ ကွိုးစားနမေယျ့အစား ကိုယျ့ကိုကိုယျ အကောငျးဆုံး ပွငျဆငျပွီး နထေိုငျဖို့က ဒီအခြိနျမှာ သငျ့အတှကျ အရေးကွီးပါတယျ။သငျ့အနနေဲ့ အကူအညီဘယျလိုရနိုငျမလဲ၊ ကိုယျ့လိုပဲ ကွုံ တှဖေူ့းသူရဲ့ ညှနျကွားပွသမှုတှေ ကိုဘယျလို ယူနိုငျမလဲ စဉျးစားရဖို့ရှိတယျ။
သငျ့ရဲ့ အတှအေ့ကွုံတှကေရရှိတဲ့ အသိပညာနဲ့ ရငျဆိုငျ စရာရှိတာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရငျဆိုငျပါ။သငျက ကတိပေးပွီးသား ကိစ်စတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး သံသယတှအေကွောကျတရားတှေ ဖွဈပျေါနတေယျ။ဖွလြှေော့ထားပါ၊ယုံကွညျပါ။ဒီအခြိနျက ဖနျတီးမှုတှပွေုလုပျဖို့ မှျောဝငျနတေဲ့အ ခြိနျ လို ဖွဈနတေယျ။ကိုယျ့ဆန်ဒတှကွေောငျ့ တဈစုံတဈရာအပျေါ ထိခိုကျမှုမရှိစဘေဲ အဲ့ဒီ့အစား ကိုယျ့ဘုံကိုယျ့နနျးကို အကောငျးဆုံးဖနျတီးလိုတဲ့ ဆန်ဒသာထား ရှိသငျ့ပါတယျ။
သင် လုပ်ဆောင်ရမယ့် တာဝန် အသစ်တစ်ရပ်ရှိတယ်။ သင့် ဘဝထဲကို ဝင်ရောက်လာမယ့် အချစ်မေတ္တာတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လက်ခံကြို ဆို ရ မယ်။
တစ်စုံတစ်ရာကို ဆုပ်ကိုင် ထားနေရတယ်ဆိုရင်လည်း ဒီအချိန်မှာ လွှတ်ချလိုက်ဖို့ သင့်နေပြီ။ သင့်အတွက် ပလန်အသစ်တွေက စောင့်နေ တယ် ။လက်တွဲဖော်မရှိတဲ့သူတွေ လက်တွဲဖော်ရှာတွေ့မယ်၊ သားသမီးလိုချင်နေတဲ့ သူတွေ သား၊ သမီးထွန်းကားမယ့် နိမိတ်တွေရှိတယ်။
အသစ် တစ်စုံတစ်ရာနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှား ဖွယ်တွေဟာ သင့်ဘဝထဲကို အစုလိုက် အပြုံလိုက်ဝင်လာဖို့ရှိတယ်။ကောင်းသတင်းတွေဝေနေပြီး ကြွယ် ဝပြည့်လျှံမှုတွေကို တစ်လုံးတစ်ဝ ခံစားနေရမယ့် အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကိုလက်ထပ်မလားဆိုတာ သိနိုင်မယ့် အချက် (၅) ချက်
တစ်စုံတစ်ရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ထဲမှာ မရှင်းမရှင်း ဖြစ်နေမယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတာတွေကို နားလည်ဖို့ ကြိုးစားနေမယ့်အစား ကိုယ့်ကိုကိုယ် အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်ပြီး နေထိုင်ဖို့က ဒီအချိန်မှာ သင့်အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။သင့်အနေနဲ့ အကူအညီဘယ်လိုရနိုင်မလဲ၊ ကိုယ့်လိုပဲ ကြုံ တွေ့ဖူးသူရဲ့ ညွှန်ကြားပြသမှုတွေ ကိုဘယ်လို ယူနိုင်မလဲ စဉ်းစားရဖို့ရှိတယ်။
သင့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကရရှိတဲ့ အသိပညာနဲ့ ရင်ဆိုင် စရာရှိတာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင်ဆိုင်ပါ။သင်က ကတိပေးပြီးသား ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သံသယတွေအကြောက်တရားတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ဖြေလျှော့ထားပါ၊ယုံကြည်ပါ။ဒီအချိန်က ဖန်တီးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ မှော်ဝင်နေတဲ့အ ချိန် လို ဖြစ်နေတယ်။ကိုယ့်ဆန္ဒတွေကြောင့် တစ်စုံတစ်ရာအပေါ် ထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲ အဲ့ဒီ့အစား ကိုယ့်ဘုံကိုယ့်နန်းကို အကောင်းဆုံးဖန်တီးလိုတဲ့ ဆန္ဒသာထား ရှိသင့်ပါတယ်။
(၁၆) နှဈသားကောငျလေး ခဈြသူနဲ့ ခြိနျးတှမေိ့ တဲ့ ရညျးစားမထားဖူးသေးသော အသကျ(၄၀) ကြျော အပြိုကွီး ရဲ့ အဖွဈ…
ညကြီး အချိန်မတော် လင်မယား နှစ်ယောက် စီးလာတဲ့ ဆိုင်ကယ် ကို မသင်္ကာလို့ ရှာဖွေ ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ..သနားစရာ ယောက်ျား ရဲ့အဖြစ်….
မိမိ ချစ်သူ ၊ မိမိ လင်ယောင်္ကျား ဘီယာ၊အရက် ပြတ်စေလိုလျှင် ..